कोरोनाबारे विज्ञ- फेरि अतिरञ्जित त्रास नफैलाऔं, लकडाउन आवश्यक छैन ! – Nepal Press
कोरोनाबारे विज्ञ- फेरि अतिरञ्जित त्रास नफैलाऔं, लकडाउन आवश्यक छैन !
२०७७ चैत १५ गते ८:५१
काठमाडौं । गत आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः सावधानीहरु अपनाउन आग्रह गर्‍याे । यसले जनमानसमा चिन्ता र कौतुहलता सृजना भयो, कतै फेरि सरकारले लकडाउन गर्ने त होइन ?
प्रारम्भिक चरणमा लकडाउनले राम्रो काम गरेको डा. दीक्षित बताउँछन् । उनले भने, ‘एक महिना मात्रै गरेको भए हुन्थ्यो । त्यो एकदम राम्रो अवसर थियो । तर लकडाउन लामो हुँदै गएपछि मान्छेले विरोध गरे ।’
लकडाउनले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग नगरेको डा. दिक्षितको निश्कर्ष छ । फेरि पनि लकडाउनको चर्चा भइरहेका बेला किन यो मोडल उपयुक्त होइन भन्नेबारे उनको भनाइ यस्तो छः
डा. पुन भन्छन्– लकडाउनले मात्रै महामारी रोकिन्न
पाठ सिकिसकेका छाैं- स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने गत वर्ष गरेको लकडाउनले पाठ सिकेको बताएको छ । लकडाउनकै समयमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालनदेखि अस्पतालहरुको तयारी गरेको तर अहिले त्यो गर्नु नपर्ने भएकाले लकडाउनमा हतारो नगर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए ।
उनले अहिले फेरि सरकारले लकडाउन गर्नपर्ने अवस्था भइनसकेको बताए । ‘पहिले हामी सबै नयाँ थियौ । त्यही बीचमा तयारी गर्नुपर्ने थियो । अहिले धेरै हिसाबले तयार नै छौं । सर्वसाधारण पनि सचेत भइसकेका छन्,’ उनले थपे, ‘संक्रमण बढ्दै गयो र अरु उपाय आएन भने विज्ञसँग आवश्यक छलफल गरेर त्यही अनुसार निर्णय लिइनेछ ।’
प्रकाशित: २०७७ चैत १५ गते ८:५१